Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို နေ့စဉ် သတင်းစာ မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ပြည်တွင်းသတင်း > NLD အမတ် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး လွှတ်တော်တက်
NLD အမတ် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး လွှတ်တော်တက်	မျိုးသန့်	| အင်္ဂါနေ့၊ ဧပြီလ ၂၄ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၅၉ မိနစ်	ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရအမတ်များ လွှတ်တော် တက်ရောက်ရေး မသေချာသေးသော်လည်း NLD ပါတီသို့ ကူးပြောင်းဝင်ရောက်ထားသည့် အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးမှာ ပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် လွှတ်တော်တက်ရောက်နေသည်ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။“ကျနော်က ပါတီဥက္ကဋ္ဌ အန်တီ့ဆီကို တရားဝင် တင်ပြပြီးတော့ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ လွှတ်တော် တက်ရောက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ ကတိသစ္စာ ပြုပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တဦးအနေနဲ့ ရှိနေပြီးပြီ။ အဲဒီအခါကျတော့ ပါတီကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်စားလှယ် တယောက် ရှိဖို့ လိုတယ်။ ဒီအတွက်ကြောင့် လွှတ်တော်တက်ပါဆိုလို့ ကျနော် လွှတ်တော် တက်နေပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ဒေါက်တာ မြတ်ဉာဏစိုးသည် ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု NDF ပါတီအား ကိုယ်စားပြု၍ ရန်ကုန်တိုင်း အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် ၄ မှ အနိုင်ရခဲ့သည်။ ယင်းနောက် ၂ဝ၁၁ ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် NDF မှ နုတ်ထွက်၍ NLD သို့ ပါတီဝင်အဖြစ် လျှောက်ထားခဲ့ပြီးနောက် NLD ၏ ပထမဆုံး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်လာသူဖြစ်သည်။NLD ၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အမတ်များ လွှတ်တော်တက်နိုင်ရေးနှင့် ပတ်သက်၍ လွှတ်တော်အတွင်း တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီမှ ဒေါက်တာအေးမောင်က ကြိုးပမ်းလျက် ရှိနေရာဒေါက်တာ မြတ်ဉာဏစိုး ကလည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။“ကျနော်ကတော့ ဆရာဦးအေးမောင်ကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်။ ကိုယ့်ပါတီအတွက် ကိုယ့်ဘာသာ လုပ်တယ်ဖြစ်နေမှာစိုးလို့။ ကျနော်တို့အတွက် ကြားလူ လိုပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဒါတွေကို ဆောင်ရွက်ဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဆရာဦးအေးမောင်တို့နဲ့ ကျနော် ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။NLD အမတ်များ လွှတ်တော်အတွင်း ဝင်ရောက်ရေးအတွက် ဒေါက်တာ ဦးအေးမောင် ဦးဆောင်၍ တိုင်းရင်းသား ပါတီများ တနင်္လာနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသေးသည်။ ဆွေးနွေးမှုရလဒ်အဖြစ် NLD မှ လိုလားနေသည့် ကတိသစ္စာဆိုရာတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို “ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်” အစား “လေစားလိုက်နာ” ဟု ပြောင်းလဲရွတ်ဆိုနိုင်ရန် လွှတ်တော်တွင် အဆိုပြုတင်သွင်းနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းလျက် ရှိနေသည်။ “ဒီဥစ္စာက လွှတ်တော်အမတ်တွေအပေါ်မှာ မူတည်တယ်ဗျ။ အချိန်တိုအတွင်းလည်း ပြီးသွားနိုင်တယ်။ လွှတ်တော်မှာ လက်ခံဆွေးနွေးပြီးတော့ အတည်ပြုတယ်ဆိုရင် ဥပဒေကြမ်းအဖြစ် တင်ပြီးရင် ပြီးပြီဗျ။ လုပ်ချင်ရင် နှစ်ရက်အတွင်း ပြီးတယ်” ဟု ဒေါက်တာအေးမောင်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။သို့သော် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ကတိသစ္စာဆိုရမည့် ပြဋ္ဌာန်းချက် ပုဒ်မ ၁၂၅ အား ပြင်ဆင်လိုပါကပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် စုစုပေါင်း၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းက စတင် တင်ပြလာပါက ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က လက်ခံ ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်သည်။ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်၏ ထောက်ခံဆန္ဒမဲဖြင့်သာ ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ရှိမည် ဖြစ်သည်။လက်ရှိ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ၃၄၃ ဦး၊ အခြားနိုင်ငံရေးပါတီနှင့် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ် ၁ဝ၅ ဦးတို့ ရှိကာ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ၁၆၆ ဦး ရှိနေသည်။တနင်္လာနေ့တွင် ပြန်လည် စတင်ကျင်းပလျက်ရှိသော လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများသည် ဧပြီလ ၃ဝ ရက်နေ့တွင် ပြီးစီးနိုင်သည်ဟု အမတ်များက ခန့်မှန်းထားပြီး ကျင်းပဆဲ လွှတ်တော်မပြီးခင် NLD အမတ်များ ကျမ်းကျိန်နိုင်မည်ဟု ရာနှုန်းပြည့် ယုံကြည်လျက်ရှိနေသည်ဟု ဒေါက်တာအေးမောင်က ဆက်ပြောသည်။“ကျနော်ကတော့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ အကုန်အဆင်ပြေမယ်လို့ ရာနှုန်းပြည့် ယုံတယ်ဗျာ” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။NLD ၏ တဦးတည်းသော လွှတ်တော်တက်အမတ်ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ မြတ်ဉာဏစိုးသည် တနင်္လာနေ့လွှတ်တော်တွင် ၅ဝဝဝ ကျပ်တန် ဖုန်းကဒ်ရရှိနိုင်ရေး စီစဉ်ထားရှိမှု ရှိမရှိ မေးမြန်းခဲ့ပြီး သူ၏ မေးခွန်းကို စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်း ဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးတင့်လွင်မှ ပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံများ၏ ဈေးနှုန်းများအတိုင်း တဆင့်ပြီးတဆင့် ထပ်မံ လျှော့ချ တပ်ဆင်သွားနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု ဖြေကြားသွားသည်။
We have 160 guests and 1 member online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved